ISKU-DAR DHOWR GOOGLE DRIVE IYO KOOTOOYINKA SAWIRRADA GOOGLE - JILICSAN
Isku-dar dhowr Google Drive iyo Kootooyinka Sawirrada Google
La dhajiyayMarkii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Febraayo 16, 2021
Ma leedahay wax ka badan hal akoon oo Google ah? Miyay adag tahay in la beddelo xisaabaadka badan? Markaa waxaad ku dhex milmi kartaa xogta guud ahaan Google Drive iyo Google Photos akoon hal akoon adiga oo isticmaalaya hagaha hoose.
Adeegga boostada ee Google-ka, Gmail, waxa uu si aad ah u maamulaa suuqa adeegga iimaylka, waxana uu leeyahay ilaa 43% wadarta guud ee suuqa oo leh in ka badan 1.8 bilyan isticmaaleyaal firfircoon. Sarrayntan waxa loo nisbayn karaa faa'iidooyin kala duwan oo la xidhiidha lahaanshaha akoon Gmail. Marka hore, akoonnada Gmail si fudud ayaa loogu dari karaa tiro mareegaha & codsiyada ah, marka labaad, waxaad helaysaa 15GB ee kaydinta daruuraha bilaashka ah ee Google Drive iyo kaydinta aan xadidnayn (waxay kuxirantahay xallinta) sawiradaada iyo fiidiyowyada Google Photos.
Si kastaba ha ahaatee, adduunka casriga ah, 15GB ee booska kaydinta ayaa ku filan in lagu kaydiyo dhammaan faylashayada, iyo halkii aan ka iibsan lahayn kayd badan, waxaan ku dhammaaneynaa abuurista xisaabaadyo dheeraad ah si aan qaar u helno bilaash. Isticmaalayaasha badankoodu sidoo kale waxay leeyihiin akoonno badan oo Gmail ah, tusaale ahaan, mid shaqo/dugsi ah, boostada shakhsi ahaaneed, mid kale oo loogu talagalay iska diiwaan gelinta mareegaha laga yaabo inay soo diraan iimaylo badan oo xayeysiis ah, iwm. iyo beddelashada dhexdooda si aad u gasho faylashaada waxay noqon kartaa aad looga xumaado.
Nasiib darro, ma jiro hab hal-guji ah oo lagu isku daro faylalka ku jira xisaabaadka Drive-ka ama Sawirrada kala duwan. In kasta oo ay jirto shaqo ku xeeran khilaafkan, marka hore waxa loo yaqaan Google's Backup and Sync Application & Midka kale waa astaanta ‘Partner Sharing’ ee Sawirrada. Hoos waxaan ku sharaxnay habka loo isticmaalo labadan iyo isku darka Google Drive iyo xisaabaadka Sawirrada ee badan.
Sida Loo Mideeyo Kootooyinka Google Drive-ka Badan & Sawirrada Google
Sida Loo Mideeyo Xogta Google Drive-ka ee Xisaabaadka Badan
Habka 1: Soo deji dhammaan xogta Google Drive-kaaga
Habka 2: Ka samee Google Backup and Sync
Sida Loo Mideeyo Koontada Sawirrada Badan ee Google
Habka isku darka xogta Google Drive waa mid toos ah; Waxaad ka soo dejisanaysaa dhammaan xogta hal akoon ka dibna ku dheji mid kale. Habkani wuxuu noqon karaa mid waqti badan qaadan kara haddii aad haysatid xog badan oo ku kaydsan Drive kaaga, laakiin si wanaagsan, sharciyada gaarka ah ee cusub ayaa ku qasbay Google inuu bilaabo Goobta qaadashada iyada oo isticmaalayaashu ay ku soo dejisan karaan dhammaan xogta la xidhiidha akoonkooda Google hal gujin.
Marka waxaan marka hore booqan doonaa Google Takeout si aan u soo dejino dhammaan xogta Drive-ka ka dibna aan isticmaalno Backup & Sync codsiga si aan u galno.
1. Marka hore, hubi inaad gashay akoonka google-ka ee aad rabto inaad xogta kala soo baxdo. Haddii aad hore u soo gashay, ku qor qaadashada.google.com gudaha ciwaanka browserkaga oo tabo gal
2. Noqo qof aan caadi ahayn; dhammaan xogtaada adeegyada iyo mareegaha Google ee kala duwan ayaa loo dooran doonaa si loo soo dejiyo. Inkastoo, waxaan halkan u joognaa oo kaliya soo dejiso alaabta ku kaydsan kaaga Google Drive , marka hore u soco oo guji Ha dooran dhammaan .
3. Hoos u dhaadhac bogga shabakadda ilaa aad Hel Drive oo sax sanduuqa ku xiga .
4. Hadda, hoos ugu sii dhaadhac ilaa dhammaadka bogga oo guji Talaabada Xigta badhanka.
5. Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad doorato a habka gaarsiinta . Midna waad dooran kartaa Hel iimaylka leh hal xidhidhiye soo dejiso dhammaan xogtaada Drive-ka ama kudar xogta sida fayl la isku riixay koontadaada Drive/Dropbox/OneDrive/Box ee jirta oo ku hel goobta faylka iimaylka.
The 'ku soo dir linkiga soo dejinta email ahaan' waxaa loo dejiyay habka gaarsiinta caadiga ah iyo sidoo kale kan ugu habboon.
Fiiro gaar ah: Xidhiidhinta soo dejinta waxa ay shaqaynaysaa todoba cisho oo kaliya, hadii aad ku guul dareysato inaad soo dejiso faylka mudadaas gudahooda, waa inaad ku celisaa habka oo dhan mar kale.
6. Marka xigta, waxaad dooran kartaa inta jeer ee aad rabto Google inuu u dhoofiyo xogtaada Drive-ka. Labada ikhtiyaar ee la heli karo waa - Dhoofinta hal mar oo dhoofi 2dii biloodba hal sano. Labada doorashoba waa kuwo is-sharaxaya, markaa horay u soco oo dooro midka ku habboon baahiyahaaga sida ugu fiican.
7. Ugu dambayntii. deji nooca iyo cabbirka faylka kaydka ah sidaad door bidayso inaad dhammaysato..zip & .tgz waa labada nooc ee faylalka la heli karo, iyo halka .zip faylalka ay yihiin kuwo si fiican loo yaqaan oo laga soo saari karo iyada oo aan la isticmaalin codsiyada dhinac saddexaad, furitaanka .tgz faylasha Windows waxay dalbanayaan joogitaanka software khaas ah sida 7-Zip .
Fiiro gaar ah: Markaad dejinayso cabbirka faylka, soo dejinta faylal waaweyn (10GB ama 50GB) waxay u baahan tahay isku xidh internet oo deggan oo xawaare sare leh. Taa beddelkeeda waxaad dooran kartaa inaad kala qaybiso Ku wad xogta faylal badan oo yaryar (1, 2, ama 4GB).
8. Dib u hubi doorashooyinka aad ku dooratay tillaabooyinka 5, 6 & 7, oo dhagsii Abuur dhoofinta badhanka si aad u bilowdo habka dhoofinta.
Iyada oo ku xidhan tirada iyo xajmiga faylasha aad ku kaydisay kaydinta Drive kaaga, habka dhoofinta waxa laga yaabaa inay qaadato wakhti. U daa bogga internetka ee la-qaadista oo furan oo sii wad shaqadaada. Sii wad inaad hubiso akoonkaaga Gmail si aad u hesho isku xirka faylka kaydka. Markaad hesho, dhagsii isku xirka oo raac tilmaamaha si aad u soo dejiso dhammaan xogtaada Drive-ka.
Raac nidaamka kore oo kala soo bax xogta dhammaan akoonnada Drive-ka (marka laga reebo kuwa wax walba la isku dari doono) ee aad rabto in aad midayso.
1. Kahor intaanan dejin codsiga kaydinta, midig-guji meel kasta oo banaan oo ku taal miiskaaga oo dooro Cusub ku xiga Folder (ama riix Ctrl + Shift + N). Magaca gal galkan cusub,' Isku dar ’
2. Hadda, soo saar waxa ku jira dhammaan faylalka la riixay (Google Drive Data) ee aad ku soo dejisatay qaybtii hore oo gal gal-galka Midaynta.
3. In la soo saaro. midig-guji faylka la cufan oo dooro Soo saar faylasha… ka dooro liiska macnaha guud ee soo socda.
4. Kuwa soo socda Jidka soo saarista iyo daaqada fursadaha, u deji dariiqa loo socdo sida Ku dar faylka miiskaaga . Guji OK ama taabo Gelida si aad u bilowdo soo saarista. Hubi inaad soo saartid dhammaan faylasha la isku cadeeyey ee ku jira galka Isku-dhafka.
5. Socodka, dab dareema browserka aad door bidayso, booqo bogga soo dejinta ee Google-ka Kaabta iyo Iskuxidhka - Kaydinta daruuraha ee bilaashka ah codsiga oo guji Soo deji Backup and Sync badhanka si aad u bilowdo soo dejinta.
6. Faylka rakibaadda ee Backup and Sync waa kaliya 1.28MB cabirkiisu sidaa darteed waa inuusan browser kaaga qaadan wax ka badan dhowr ilbiriqsi si uu u soo dejiyo. Marka faylka la soo dejiyo, dhagsii installbackupandsync.exe Joog bar-ka-soo-dejineed (ama galka wax-soo-dejinta) oo raac dhammaan tilmaamaha shaashadda si aad rakib codsiga .
7. Furan Kaabta iyo isku xidhka ka Google marka aad dhammayso rakibidda. Marka hore waxa lagugu soo dhawaynayaa shaashad soo dhawayn ah; ku dhufo Bilow in la sii wado.
8. Soo gal ku Akoonka Google waxaad jeclaan lahayd inaad ku biirto dhammaan xogta.
9. Shaashadda soo socota, waxaad dooran kartaa faylasha saxda ah iyo faylalka ku jira kombayutarkaga si loo kaydiyo. Sida caadiga ah, codsiga doorta dhammaan shayada ku yaal miiskaaga, faylasha ku jira galka Documents iyo Pictures si joogto ah gurmad. Ka saar alaabtan oo dhagsii Dooro gal doorasho.
10. Daaqadda Dooro tusaha soo baxa, u gudub meesha Isku dar galka miiskaaga oo dooro. Codsigu wuxuu qaadan doonaa dhowr ilbiriqsi si loo xaqiijiyo galka
11. Hoosta sawirka iyo muuqaalka qaybta cabbirka gelinta, dooro tayada gelinta sida aad doorbidayso. Hubi inay ku filan tahay meel kaydinta bilaashka ah ee Drive kaaga haddii aad dooranayso inaad geliso faylalka warbaahinta tayadooda asalka ah. Waxaad sidoo kale haysataa ikhtiyaarka ah inaad si toos ah ugu dhejiso Google Photos. Guji Xiga in horay loo socdo.
12. Daaqada ugu dambeysa, waxaad dooran kartaa inaad isku hagaaji waxa jira ee Google Drive kaaga iyo kombayutarkaga .
13. Saxeexa ' Ku xidh My Drive kombiyuutarkan ' Ikhtiyaarka ayaa sii furi doona doorasho kale - Isku-dubarid wax kasta oo ku jira wadista ama dhowr faylal la doorto. Mar labaad, fadlan dooro ikhtiyaar (iyo Folderka) sida aad doorbidayso ama uga tag Sync My Drive doorkiisa kumbuyuutarka oo aan la xirin.
14. Ugu dambeyntii, guji Bilow badhanka si aad u bilowdo hawsha kaabisinta. (Wax kasta oo cusub oo ku jira galka Isku-dhafka ayaa si toos ah loo kaydin doonaa si aad u sii wado ku darida xogta xisaabaadka Drive-ka galkan.)
Sidoo kale Akhri: Ku soo celi Abka iyo Dejinta taleefan cusub oo Android ka Google Backup
Isku darka laba xisaabood oo sawir oo kala duwan ayaa aad uga fudud isku darka xisaabaadka Drive-ka. Marka hore, uma baahnid inaad soo dejiso dhammaan sawiradaada iyo fiidyowyadaada si aad u nasato, marka labaadna, xisaabaadka sawirada waxaa lagu dhex milmi karaa arjiga mobilada laftiisa (Haddii aadan hore u haysan, booqo Sawirada App-ka la soo dejiyo). Tani waxaa suurtageliyay ' Wadaagista lamaanaha ' sifada, kaas oo kuu ogolaanaya inaad la wadaagto dhammaan maktabadaada akoon kale oo Google ah, ka dibna waxaad ku milmi kartaa adiga oo kaydinaya maktabadan la wadaago.
1. Ama ku fur appka Photos talefoonkaaga ama https://photos.google.com/ on your desktop browser.
laba. Fur goobaha sawirada adiga oo gujinaya astaanta gear-ka ee ku taal geeska sare ee midig ee shaashaddaada. (Si aad u gasho jaangooyooyinka sawirada taleefankaaga, marka hore, dhagsii astaanta astaantaada ka bacdi Settings Photos)
3. Hel oo ku dhufo Wadaagista lammaanaha (ama maktabadaha la wadaago) dejinta.
4. Boobka soo socda, dhagsii Wax dheeri ah baro haddii aad jeclaan lahayd inaad akhrido dukumeentiyada rasmiga ah ee Google ee muuqaalka ama Bilow in la sii wado.
5. Haddii aad si joogto ah iimaylo ugu dirto akoonkaaga kale, waxaad ka heli kartaa Talo soo jeedinta lafteeda. Inkastoo, haddii aysan taasi ahayn, geli ciwaanka emailka gacanta oo guji Xiga .
6. Waxaad dooran kartaa inaad wadaagto dhammaan sawirada ama kaliya kuwa qof gaar ah. Ujeedooyinka isku darka, waxaan u baahan doonaa inaan doorano Dhamaan sawirada . Sidoo kale, hubi in ' Kaliya tus sawirada ilaa maalintan doorashada ’ waa off oo guji Xiga .
7. Shaashada u dambaysa, dib u eeg doorashadaada oo guji Soo dir martiqaad .
8. Calaamadee sanduuqa boostada Akoonka aad hadda u dirtay martiqaadka. Fur boostada martiqaadka oo guji Fur Google Photos .
9. Guji Aqbal Guji soo socda si aad u aragto dhammaan sawirada la wadaago.
10. Dhowr ilbiriqsi gudahood, waxaad heli doontaa ‘ Dib ula wadaag ’ Ka soo bax dhanka midigta sare, adigoo weydiinaya inaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto sawirada xisaabtan mid kale. Xaqiiji adigoo gujinaya Bilaabayaa .
11. Mar labaad, dooro sawirada la wadaagayo, deji ' Kaliya tus sawirada ilaa maalintan doorashada ’ in laga baxo, iyo soo dir martiqaadka.
12. On the 'Daar autosave' soo booda soo socda, dhagsii Bilow .
13. Dooro inaad kaydsato Dhamaan sawirada maktabadaada oo dhagsii La sameeyay in la isku daro waxa ku jira labada akoon.
14. Sidoo kale fur akoonka asalka ah (kan la wadaagaya maktabadeeda) iyo aqbal martiqaadka lagu soo diray tallaabada 10 . Ku soo celi nidaamka (tallaabooyinka 11 iyo 12) haddii aad rabto inaad gasho dhammaan sawiradaada labada akoon.
Isku-dubarid Xisaabaadka Google Drive-ka ee Badan Windows 10
10 siyaabood oo lagu hagaajiyo sawirada Google-ka ee aan dib loo celin
5 siyaabood oo looga saaro Avast Antivirus gudaha Windows 10
Noo soo sheeg haddii ay dhibaato kaa haysato isku darka Google Drive & Sawirada xisaabaadkaaga adoo isticmaalaya hababka kor ku xusan ee qaybta faallooyinka ee hoose, waxaanan kuugu soo celin doonaa ASAP.
Elon waa qoraa tignoolaji ah oo ka tirsan Cyber ​​S. Waxa uu qorayay sida loo hago ilaa 6 sano hadda oo uu daboolay mowduucyo badan. Wuxuu jecel yahay inuu daboolo mowduucyada la xiriira Windows, Android, iyo tabaha iyo tabaha ugu dambeeyay.